माघ ९ गते हुने निर्वाचनमा यसरी पनि मतदान गर्न सकिने! - Birgunj Sanjalमाघ ९ गते हुने निर्वाचनमा यसरी पनि मतदान गर्न सकिने! - Birgunj Sanjalमाघ ९ गते हुने निर्वाचनमा यसरी पनि मतदान गर्न सकिने! - Birgunj Sanjal
माघ ९ गते हुने निर्वाचनमा यसरी पनि मतदान गर्न सकिने!
६ माघ २०७६, सोमबार २२:३४
निर्वाचन आयोगले राष्ट्रियसभा सदस्यको माघ ९ गते हुने निर्वाचनमा अन्तिम मतदाता नामावलीमा नाम समावेश भएका मतदाताले मतदाता परिचयपत्रको विकल्पमा सरकारी निकायबाट फोटोसहित जारी भएको अन्य परिचयपत्रको आधारमा पनि मतदान गर्नसक्ने व्यवस्था मिलाएको छ ।
आयोगले त्यसका लागि आवश्यक व्यवस्थापन मिलाउन निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयलाई निर्देशन दिएको छ । उक्त निर्वाचनका सन्दर्भमा आज राति १२ बजेबाट मौन अवधि शुरु हँुदैछ ।
यस निर्वाचनबाट ५९ सदस्यीय स्थायी सदनका रुपमा रहेको राष्ट्रियसभामा १८ जना नयाँ सदस्यको चयन हुने छ । उन्नाईस सदस्यको आगामी फागुन २० गते दुईवर्षे कार्यकाल पूरा हँुदैछ । उहाँहरुको कार्यकाल पूरा हुनु ३५ दिनअघि नै नयाँ सदस्यका लागि निर्वाचन गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था रहेको छ । रिक्त हुने एकजना सदस्यको भने सरकारको सिफारिशमा राष्ट्रपतिबाट मनोनित हुने व्यवस्था छ ।